Aragtida midaysan ee Waxgaradka Beesha Hiraab - (Baaqa koowaad) | KEYDMEDIA ONLINE
Aragtida midaysan ee Waxgaradka Beesha Hiraab - (Baaqa koowaad)
London (KON) - Anagoo ah WAXGARADKA BEESHA HIRAAB ee UK, waxaan si cad u sheegaynnaa in shirka ka furmay Magaalada Muqdisho oo loogu magac daray nabadaynta beelaha Soomaaliyeed ee deggan Jubbooyinka ee dawladda soo qaban qaabisay inuu yahay marin habaabin iyo waqti dhumis.
Ergada shirka ka qaybgalaysa, qaabka loo qabshay, shaqsiyaasadka ka qaybgalaya oo dagaal ogaayalaa ah habka ay dadka u metelaan iyo guud ahan guddoonka shirka iyo hagiddiisaba ay tahay mid aan mudnayd in shir dib u heshiisiin lagu hirgalsho.
Waxaan loogu yeeray "Shirka dib u heshiisiinta Gubboyinka " waa mid aan laga fiirsan oo aan lagu Casuumin qaybo muhim ah oo ka mid ah dadkii asal ahaan lagu yiqiin ee degaanka. waxaa la tixgalshay kuwii soo duulay oo Dadka laayey ee hubka iyo xoogga ku qabsaday deeganka iyagoo kaashanaya Ciidan shsheeye.
Haddii shir dib u heshiineed la qabanayo waxaa muhim ah in lagu hirgalsho is fahamka Beelaha oo ku salaysan wadaag Cadaalad degaan iyo sinnaan. Maxaa yeelay kaa kaliya ayaa xal lagu heli karaa, oo sad bursi iyo Xaqiraad waa midkii Soomaali ay horay u eedday ee halkaa dhigay.
Waxaan codsi iyo dalab u gudbinaynaa in Madaxda Dawladdu ka fiisato ILDHUUFKA Siyaasadeed ee shirkaan lagu abuubalay oo dhalin kara colaad dagaal sokeeye oo lagu hoobto.
Waxaan u aragnaa in shirkaan yahay mid qolooyin gaar ah loo abaabulay, sidaa dareeddeed nama khuseeyo.
WAXGARADKA BEESHA HIRAAB ee UK - Aqon.besha.hiraab@hotmail.com